Mayelana NATHI - Shijiazhuang Teneng Electrical & Mechanical Equipment Co., Ltd.
IShijiazhuang Teneng Electrical & Mechanical Equipment Co, Ltd
I-Shijiazhuang Teneng Electrical & Mechanical Equipment Co, Ltd ingumkhiqizi osebenza kahle womugqa wokukhiqiza wepayipi wensimbi, umugqa obandayo wokwenza umugqa, umugqa wokunquma, umugqa wokusika nobude kanye nemishini ehlobene nayo ehlobene. Inkampani iTeneng ibhizinisi lesimanje elikwaziyo ukwenza ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza nokuthengisa. UTeneng uyilungu lomkhandlu le-China Roll Forming Association, ilungu lomongameli we-Hebei Steel Tube Trade Association.
Imishini ye-Teneng iyimishini yokukhiqiza ithubhu esebenza kahle kunazo zonke emhlabeni. E-China, abasebenzisi abaziwayo yi-Hebei Jingye Group, iSANY Group, i-China Shipbuilding Industry Corporation, i-Chongqing Changzheng Heavy Industry Co., Ltd njll.
Imishini ye-Teneng isebenza kwamanye amazwe amaningi ngaphandle kweChina, njenge
American, Portugal, Venezuela, Brazil, Paraguay, Russia, Ukraine, Japan, Saudi Arabia, Sudan, Uzbekistan, Kazakhstan, Vietnam, India, njalo njalo. I-Teneng ithole ukunconywa okuvela kumakhasimende ethu emhlabeni jikelele ngomkhiqizo osezingeni eliphakeme nensizakalo ephelele emva kokuthengisa.
Okuhlangenwe nakho kwephrojekthi:
Selokhu kwasungulwa, inkampani ye-Teneng inezinsizakalo ezingamakhulu emigqa yokukhiqiza yamakhasimende, sinolwazi oluningi lobuchwepheshe. Ngaphansi kokuqondiswa kochwepheshe basekhaya kanye noprofesa, iTeneng ilandelela ukunyakaza kobuchwepheshe obuthuthukisiwe bakwamanye amazwe, ukumunca, ukudala nokuthuthukisa ukubanda okubandayo kobuchwepheshe. Okokusebenza kukaTeneng okusetshenziswe kumbhobho we-API, okwezimoto, kwepayipi lokwakha, ipayipi lefenisha, ukukhiqizwa kwesitsha, amaphaneli ocingo, imishini yezemidlalo nokunye.
Ukufunwa kwamakhasimende kungamandla okuthuthuka kwezobuchwepheshe, amandla enkampani aqinile ukusekelwa kokuthuthukiswa kobuchwepheshe. Inkampani ye-Teneng izobambisana nabakhiqizi basekhaya nabangaphandle ukunikezela ngemishini esezingeni eliphakeme, ubuchwepheshe obuchwepheshe, insizakalo ephelele yamakhasimende.
Ukukhiqizwa Power & Service System:
Inkampani ye-Teneng inezigidi zamamitha ayisikwele wefektri, futhi ibuye ibe nohlelo lokuxhumanisa oluqinile nokwenziwa kwensimbi nokubumba. Izinsiza ezisezingeni ezijwayelekile zikhethiwe umkhiqizo owaziwayo webhizinisi, ukusebenza komkhiqizo okuthuthukisiwe nempilo yesevisi. Ukusuka ekusetshenzisweni kwengxenye ukuhlanganisa umshini, senza amasheke kuwo wonke amazinga, bese siqhubeka nohlelo lomsebenzi wokukhiqiza. Ngemuva kwensizakalo yomuntu siqu ukuqeqeshwa kusuka kulo mkhuba, ukuzibandakanya nemishini yokuyalela iminyaka eminingi, ukuxazulula izinkinga ezahlukahlukene ekukhiqizweni komkhiqizo, ukufakwa kwemishini yokuqondisa nokuqeqesha abasebenzi kumakhasimende.
Amandla oqinile wezobuchwepheshe kanye nohlelo oluphelele lwensizakalo yitshe legumbi likaTeneng.
I-Teneng inonjiniyela bokuklama abayi-15 no-20 commission engineer, bonke banolwazi lweminyaka engaphezu kwengu-15 embonini ye-tube mill. Abasebenzi bakaTeneng bahlala behamba phambili kwezobuchwepheshe, belandelela intuthuko yakamuva kubuchwepheshe be-tube mill, ngaphakathi emakethe nasekushintsheni kwesidingo sekhasimende, benza izinto ezintsha kubuchwepheshe obuthuthukisiwe obusetshenziswa emikhiqizweni.